Etu esi mepụta Snapchat Ad | Martech Zone
N’oge na-adịbeghị anya, Snapchat amụbaala ihe na-eso ya ruo ihe karịrị otu narị nde mmadụ n'ụwa niile ihe karịrị ijeri vidio iri a na-ele kwa ụbọchị. Site na ọnụọgụ ndị na-eso ụzọ na ngwa a kwa ụbọchị, ọ bụ ihe ijuanya na ụlọ ọrụ na ndị mgbasa ozi na-enuga na Snapchat iji kpọsaa ahịa ha.
Millennials ugbu a na-anọchite anya 70% nke ndị ọrụ niile na Snapchat Na ndị ahịa na-etinye 500% karịa na puku afọ karịa ndị ọzọ niile jikọtara, enweghị mmetụta na ha nwere. O di nwute, ulo oru ka na-agbali ire ahia na otutu puku afọ dika ha mere nye ọgbọ ndi ozo; agbanyeghị, dịka ọgbọ ọ bụla, ọtụtụ puku afọ nwere chọrọ na mkpa ndị ahịa kwesịrị ịghọta iji nwee ọganiihu na mkpọsa ha.
Ebe nrụọrụ mgbasa ozi dị ka Facebook na Instagram na-eji nnukwu ọrụ ha eme ihe iji rịọ ụdị ndị na-achọ ịkpọsa maka afọ ugbu a. Ọ bụ ezie na Snapchat nwere obere oge na mgbasa ozi, ngwa a ma ama na-enye ohere ka mmadụ niile site na nnukwu ụlọ ọrụ gaa na azụmaahịa mpaghara iji kpọsaa na ikpo okwu ha.
E nwere ụzọ atọ dị iche iche dị iche iche nwere ike isi jiri Snapchat nweta ndị ahịa: Snap Ads, Sponsored Geofilters, and Sponsored Lenses. N'etiti nhọrọ atọ a, ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ nnwere onwe okike na otu ha si chọọ itinye akara ha dabere na ndị na-azụ ha.
Nhọrọ Mgbasa ozi 1: Snap Ads
Mgbasa ozi ngwa ngwa bụ 10 nke abụọ, mgbasa ozi nwere ike ịbanye n'etiti akụkọ Snap. Snapchatters nwere ike ibia elu mgbe ị na-elele mgbasa ozi maka vidiyo ma ọ bụ ederede agbatị iji nwetakwuo ihe ọmụma. Ohere dị na ya bụ na ị hụla mgbasa ozi ndị a na usoro iheomume akụkọ gị, mana kedu ka esi kee otu?
Maka nnukwu ụlọ ọrụ, Snapchat nwere nhọrọ mgbasa ozi a maka ndị nwere oke nhọrọ mmefu mgbasa ozi. Snapchat nwere otu ndị Mmekọ ị nwere ike ịkpọtụrụ site na email na Onye MmekọInquiry@snapchat.com.
Nhọrọ Mgbasa ozi 2: Geofilters Na-akwado
Ndị na-akwado Geofilters bụ swipeable ákwà ị nwere ike idowe na ntanetị dabere na ọnọdụ gị. Usoro mmekọrịta a na-enye Snapchatters ohere iji gosi ụmụazụ ha ebe ha nọ na ihe ha na-eme. Dabere na Data dị n'ime nke Snapchat, otu National Sponsored Geofilter na-erute 40% na 60% nke Snapchatters kwa ụbọchị na US. N'ihi nke a na iru na mmetụta a, Snapchat abụrụla nhọrọ mgbasa ozi mara mma nye ụlọ ọrụ buru ibu.
Agbanyeghị, Geofilters ejedebeghị na nnukwu ụlọ ọrụ. Ebe ọ bụ na mgbasa ozi ndị a dịtụ mfe ịmepụta, ha ewuwo nke ọma n'etiti obere azụmaahịa na ndị mmadụ ọ bụla. Ma ị na-agba mkpọsa mgbasa ozi mba ma ọ bụ naanị ịnabata nnọkọ ụbọchị ọmụmụ nke na-atụghị anya ya maka otu enyi, Geofilters na-akwado ya bụ ụzọ magburu onwe ya iji jikọọ ụwa. .
Mepụta Geofilter akwadoro
Design - Mgbe ịmalite ịmepụta geofilter gị n'ịntanetị, ị ga-ahụ nhọrọ abụọ. You nwere ike ịhọrọ “Jiri nke Gị”, nke ị mepụtara imewe nke gị site na ncha site na iji Photoshop ma ọ bụ ndebiri ihe ndebiri nke Snapchat nyere. Ma ọ bụ, ị nwere ike “Mepụta ”ntanetị” wee họrọ nhọrọ nzacha dịka emume (ntụgharị ụbọchị ọmụmụ, mmemme, agbamakwụkwọ wdg). Agbanyeghị nhọrọ ị họọrọ, gbaa mbọ gụọ ya Ịnọ n'okpuru Iwu n'ihi na nkọwa na usoro iheomume, iwu, na ihe oyiyi size chọrọ!
map - Na nhazi nkewa, a ga-ajụ gị ka ịhọrọ oge nke nzacha gị ga-adị ndụ .. Dịka iwu, Snapchat anaghị ekwe ka nzacha ga-adị ndụ karịa ụbọchị iri atọ. N'ime oge nkewa, ị ga-ahọkwa mpaghara na ọnọdụ ebe geofilter gị ga-adị. Naanị setịpụ "ngere" na maapụ ahụ iji hụ ego gị geofilter ga-efu dabere na okirikiri ya.
zuo - Mgbe ịmechara ma depụta geofilter gị, ị ga-enyefe ya maka nyocha. Snapchat ga - azakarị n’ime ụbọchị azụmahịa. Mgbe ị kwadoro, zụta gị Geofilter na weebụsaịtị Snapchat ma chere ka ọ dịrị ndụ!
Nhọrọ Mgbasa ozi 3: Lens nke akwadoro
Nhọrọ nke atọ Snapchat nke mgbasa ozi nke ụdị nwere ike iji bụ Lens Sponsored. Anya m bụ njirimara ihu ihu na Snapchat nke na-enyere aka ịmepụta ihe okike n'elu ihu onye ọrụ. Anya m ndị a na-agbanwe kwa ụbọchị ma na-adị ka ndị enweghị uche na ụma dịka Snapchat chọrọ.
Ọ bụ ezie na Snapchat mebere imirikiti anya m ndị a, ụlọ ọrụ nwere ike ịmepụta ma zụta anya m maka ebumnuche mgbasa ozi. Otú ọ dị, n'ihi na anya m na-akwụ ụgwọ dị oke ọnụ ịzụta, anyị na-ahụkarị anya maka nnukwu ụdị dịka Gatorade ma ọ bụ Taco Bell.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ka nzuzu iji meefu $ 450K - $ 750K kwa ụbọchị na mkpọsa Snapchat, nnukwu ụlọ ọrụ egosila na itinye ego na oghere nkwado na-akwụ ụgwọ dị ukwuu. A kpọrọ Gatorade “Super Bowl Victory Lense,” ihe karịrị ugboro nde 60, na-anya isi nde mmadụ 165! N'ihi nke a, Gatorade hụrụ 8% mmụba na ebumnuche ịzụta.
Dabere na ọnụ ọgụgụ ndị a, o doro anya na ikike nke Sponsored Lens bụ ihe ịtụnanya. N'ihi nnukwu ọnụahịa aha metụtara ha, Snapchat ejiri lenses nkwado ka na ụdị ndị buru ibu nwee nnukwu mmefu ego. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnwee $ 450K- $ 750K ịgha ụgha ma chọọ ịme Lens Nkwado, kpọtụrụ nke ọ bụla Ndị mmekọ mgbasa ozi Snapchat ma ọ bụ zitere ha ozi na Onye MmekọInquiry@snapchat.com. Ndị mmekọ ahụ ga - enyere gị aka na usoro ọ bụla nke usoro mkpọsa a na - enye ntụnye okike yana ịza ajụjụ ọ bụla ị nwere.
Site na nnukwu njirimara ya na nhọrọ mgbasa ozi okike, Snapchat egosila na ọ bụ ikpo okwu bara uru maka ụlọ ọrụ nwere ụdị na nha niile iji soro ndị na-ege ha ntị na-emekọrịta ihe. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ihe omume ma ọ bụ na-ewepụta ngwaahịa ọhụrụ, tụlee otu n'ime nhọrọ ndị ahụ edeturu ma malite ịhụ mgbanwe ndị na-arị elu!
Tags: Millennialssnap mgbasasnapchat mgbasa ozisnapchat mgbasa ozisnapchat geofilterlens snapchatsnapchat snap mgbasasnapchat nkwado anya m
Etu ị ga-esi gbanye arụmọrụ ahịa gị maka imepụta arụmọrụ
M nọ na-eche ma ọ bụrụ na i nwere ihe ọmụma banyere otú ike Snapchat anya m, nke softwares ha na-eji? ikekwe i nwere ike ima.